Umaka: ukuphepha » Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 4 imizuzu Asivame ukuxoxa ngokuphepha okuku-inthanethi noma i-Dark Web. Ngenkathi izinkampani zenze umsebenzi omuhle wokuvikela amanethiwekhi wazo angaphakathi, ukusebenza ekhaya kuvule amabhizinisi kwezinye izinsongo zokungenelwa nokugenca. Izinkampani ezingama-20% zathi zibhekene nokwephulwa kwezokuphepha ngenxa yesisebenzi esikude. Ukukhuthazela ekhaya: Umthelela we-COVID-19 kwezokuphepha kwebhizinisi I-cybersecurity ayiseyona nje umthwalo we-CTO. Njengoba ukuthembela kuyimali ebaluleke kakhulu ku-
Ukuhlaselwa Okuphezulu Okungu-5 Kwenziwe Kuma-Ecommerce Sites
NgoLwesithathu, July 1, 2020 NgoLwesithathu, July 1, 2020 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Esinye sezibalo ezishaqisayo maqondana ne-COVID-19 nokuvalwa phansi kukwanda okumangazayo komsebenzi we-e-commerce: I-COVID-19 isheshise kakhulu ukukhula kwe-e-commerce, ngokusho kombiko we-Adobe okhishwe namuhla. Ukusetshenziswa okuphelele kwe-inthanethi ngoMeyi kufinyelele ku- $ 82.5 billion, kukhuphuke ngama-77% unyaka nonyaka. UJohn Koetsier, COVID-19 Ukukhula Okusheshayo Kwe-E-Commerce '4 Eminyakeni Engu-6' Akukho mboni engakaze ithintwe… izingqungquthela zihambile, izikole zathuthela ekuphathweni kokufunda naku-inthanethi, ezitolo
Faka Okuphakelayo Kwangaphandle Kwe-Podcast kuma-feed wakho we-WordPress Site
ISonto, May 10, 2020 ISonto, May 10, 2020 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Ungasishicilela kanjani isifunzo se-podcast esingethwe ngaphandle njengokuphakelwa okwenziwe ngaphakathi kwesimo sakho se-WordPress.
Ungayivikela Kanjani i-WordPress kuzinyathelo ezilula eziyi-10
NgoMsombuluko, Februwari 10, 2020 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2020 Akshat Choudhary
Isikhathi sokufunda: 6 imizuzu Uyazi ukuthi ngaphezu kwama-90,000 hacks azanywa umzuzu ngamunye kumasayithi we-WordPress emhlabeni jikelele? Yebo, uma ungumnikazi wewebhusayithi enikwe amandla yi-WordPress, leyo stat kufanele ikukhathaze. Akukhathalekile ukuthi uqhuba ibhizinisi elincane. Abaduni abangabandlululi ngokuya ngosayizi noma ukubaluleka kwamawebhusayithi. Bafuna kuphela noma yikuphi ukuba sengozini okungasetshenziswa ukuze kuzuze bona. Ungahle uzibuze - kungani abahlaseli bekhomba amasayithi e-WordPress ku
Uyingozi Kangakanani Umbhoshongo Wakho WeTech?
NgeSonto, Septhemba 23, 2018 NgeSonto, Septhemba 23, 2018 ULindsay Tjepkema
Isikhathi sokufunda: 7 imizuzu Ungaba namuphi umthelela uma umbhoshongo wakho wezobuchwepheshe uwela phansi? Kungumqondo ongithinte ngeMigqibelo embalwa edlule njengoba izingane zami bezidlala iJenga ngenkathi ngisebenza kwisethulo esisha sokuthi kungani abathengisi kufanele bacabange kabusha izitaki zabo zobuchwepheshe. Kungitholile ukuthi izitaki zobuchwepheshe nemibhoshongo yeJenga empeleni kunokuningi okufana ngakho. UJenga, kunjalo, udlalwa ngokunqwabelana kwamabhulokhi okhuni kuze kube kuphelele
1 2 ... 4 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 1 of 4